Lactonesa (mayonnaise tsy misy atody) - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Lactonesa (mayonnaise tsy misy atody)
Androany aho mitondra anao ny fomba fahandro iray izay nanome ahy fiadanan-tsaina kely amin'ity fahavaratra ity. Momba ny lactonese ary ho an'ireo izay tsy mahalala hoe inona izany dia holazaiko anao fa izany no izy Mayonnaise tsy misy atody.
Tena mety amin'ny hafanana satria, amin'ny tsy fampiasana atody, tsy manana ny loza isika mba hahazoana salmonellose. Ny atody dia soloina ronono ary mety ho omby na soja. Noho izany dia mety ihany koa ny sakafo vegan.
Tena mitovy amin'ny mayonnaise izy io, na dia ao an-trano aza raha tsy isainao fa tsy misy atody ary tsy fantany izany. Efa imbetsaka aho no nanomana izany Hiaraka salady, pudding, atody fenoina, Salady Rosiana… Ny vokany dia tsara toy ny tamin'ny mayonaise nentim-paharazana.
Tsotra be ny manomana ary afaka mandray vitsivitsy 3 na 4 andro ao anaty vata fampangatsiahana mihidy mafy.
1 Lactonesa (Mayonnaise tsy misy atody)
Amin'ity fomba fahandro ity dia hadinonao ny salmonellosis.
Tanamasoandro 300 g na menaka oliva malefaka
Ronono 150 g
1 tongolo gasy (tsy voatery)
Ranom-boasarimakirana 1/2 na vinaingitra vitsivitsy (tsy voatery)
Mametraka siny eo amin'ny saron'ny Thermomix® izahay, manindry ny fiasa mizana ary mandanja ny menaka. Namandrika izahay.
Apetrakay ao anaty vera ny ronono, tongolo lay ary sira. Izahay dia manao fandaharana 1 minitra, 37º, hafainganam-pandeha 5
Raha tsy mametraka ny tongolo lay isika, dia manomana 30 segondra, 37º, hafainganam-pandeha 5.
Miaraka amin'ny vavam-bary eo amin'ny sarony, manao fandaharana izahay 3 minitra, 37º, hafainganana 5 ary aidino tsikelikely ny menaka amin'ny sarony.
Ampio ny voasarimakirana na vinaingitra ary afangaro mandritra ny segondra vitsy amin'ny hafainganam-pandeha mitovy.
Raha tiantsika ny hanome loko azy dia afaka asiana loko kely na voantsinapy.
Fanazavana fanampiny - Atody voahidy / Recipe salady Rosiana 9 tany am-boalohany
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: General, Tsy mahazaka atody, Saosy, Vegan
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Saosy » Lactonesa (mayonnaise tsy misy atody)
Salama, ity no fomba fahandro tokana manohitra ahy amin'ny thermomix. Efa nanandrana in-4 aho ary manapaka ahy foana io, ary tsy afaka manamboatra azy aho. Naheno aho fa rehefa mandraraka ny diloilo ianao dia tsy maintsy mameno rano ilay kaopy mba hahazoany lanja ary hiditra miadana kokoa ny diloilo. Raha manapaka ahy izany, inona no azoko atao?
Fetsy tsy azo lavina: tena nihazakazaka aho ary namaha azy io tamin'ny iray amin'ireo kilasy tamin'ny fahavaratra. Amin'ny dingana faharoa, aza manindry ny mari-pana intsony. Ny faha-37 dia hajanona hatrany satria mbola mafana ny vera, aza manandrana mamono azy amin'ny alàlan'ny fanindriana indray satria io fomba io dia hiverina indray. Indraindray aho mandrotsaka menaka 400, saingy voninkazo na oliva tena malefaka. Io no fomba fahandro tonga lafatra amin'ny fahavaratra. Mirary ny soa indrindra.
Mamaly an'i Mariló
Misaotra betsaka Mariló. Mahatalanjona ianao !! ny habetsaky ny tetika omenao anay. Hotsaroako ianao amin'ny manaraka anaovako azy. Matokia fa ho tonga amin'ny fomba fahandro hahita ny hevitrao aho.
Ana, tao amin'ny kilasy thermomix, henoko koa ny fandrarahana rano ao anaty goblet mba tsy hiakatra izy rehefa haidinao ny diloilo ary ho simba izany.
Ny marina dia ny lactonese-ko tsy mbola nokapaina ary tsy ho hitako izay holazaina raha tapaka io. Andao hojerentsika raha misy mahita ny hevitrao ary milaza amintsika ny zavatra ataony.
Salama! Ny hany manohitra ahy dia ny mayonnaise, izany no mahatonga ahy manao lactonese foana, tsy haiko ny antony. Marina ianao ry Silvia, raha tsy miteny ianao (momba ny atody) dia tsy misy mahatsikaritra.
Novakiako tao amin'ny FACEBOOK fa hiala i Elena, mahamenatra, manantena aho fa handeha tsara ny zava-drehetra ho antsika roa, oroka marobe.
Misaotra Begoña, tamin'ny teninao. Ny mayonnaise dia tapaka ihany koa indraindray, saingy tsy izany. Tiako ny hivoahan'ny azy.
Mbola tsy vitako izany! Indray mandeha aho no nanao an'io ary nivoaka ara-dalàna satria nanampy menaka oliva mahery aho ary nihanika ny rindrina ianao! Hehehehe tsy tsapako fa tsy maintsy nasianao menaka tanamasoandro hehehe, tsy fahombiazana ara-teknika kely !! Ka tsy maintsy averiko.
Irene, ataoko amin'ny menaka malefaka izy io, fa tsy volomaso tena izy ary manankarena be. Andramo izany dia holazainao amiko. Mirary ny soa indrindra
Ny mayonnaise sy lactonnaise dia samy manohitra ahy, navelako tsy ho vita izany ary raha vao manapaka ahy izy dia tsy misy fomba fanamboarana azy
Andramo indray i Pepi, miaraka amina tetika toy ny fametrahana rano ao anaty kaopy na ilay fitaka lazain'i Mariló amintsika amin'ireto fanehoan-kevitra ireto. Andao jerena raha mivoaka amin'ny farany.
Rehefa tapahina ny mayonnaise dia esory ny vera, ampio atody sy vinaingitra avy eo ary hokapohina indray amin'ny 3, ary ampidirinao izay tapaka kely tsikelikely ary amin'ny 3 foana.
jubilant89 dia hoy izy:
olaaa efa nanao an'io recette io aho exo I talohan'ny pejy hafa ary nataoko nandritra ny fahavaratra iny ary toaviaa tsy mbola tapaka aho !!!! Hahaha
Valio ny jubilo89
Faly aho!! mayonnaise tena maivana sy tsotra izy io.
eve rabadan dia hoy izy:
Izaho dia tao an-dakilasy tao amin'ny ivon-toerana thermomix vao nividy ary nanao an'ity recette ity izy ireo, efa nanandrana izany tao an-trano aho ary mivoaka tsara dia tsara, nofenoiko rano ilay vera rehefa nametraka ilay menaka teo amin'ny sarony izay niditra tsikelikely tao anaty thermos aho ary mivoaka tsara be izy ah !! Nilaza tamiko izy ireo fa azo atao amin'ny ronono soja koa izy io, na dia mbola tsy nanandrana azy aza aho, nefa tsy manapaka azy!
Valiny tamin'i Eva rabadan
Misaotra tamin'ny anjara birikinao Eva. Te hanandrana ronono soja ihany koa aho, izay ampiasain'ny zanako vavy.
Arguiñano dia hoy izy:
Hiezaka ny hanao azy indray aho, miaraka amin'ity dia ho 3, ny roa ambiny tsy mandeha tsara. Misaotra anao amin'ny resipeo.
Valiny ho an'i Arguiñano
Hilaza aminay ianao raha sambatra ianao amin'ity indray mitoraka ity ary hita fa tsara !!
Tena matsiro! Efa nomaniko io, indraindray manampy laisoa mena vitsivitsy aho ary mivoaka amin'ny loko tsara tarehy!
Hevitra tsara izany, andramako izany fikafika izany, hahagaga ny fianakaviako amin'izany loko kely izany.
maloto dia hoy izy:
Tiako ho fantatra ny fomba fanaovana sakafo, noho ny regimen ary nahoana izy io no tapaka indraindray?
Valio ny banga
Mieritreritra aho fa hitady mayonnaise ho an'ny sakafo, tsy ratsy ny mahita azy. Ary maninona no tapakaina, indraindray satria mangatsiaka be ireo fangaro, tsy maintsy apetrakao amin'ny hafanan'ny efitrano.
Mbola tsy notapahiko io ary efa nataoko hatry ny ela, ary tsy nanao ny rano tao anaty kaopy mihitsy aho, dia menaka tanamasoandro foana no anaovako azy ary mivoaka matevina izy, notenenina aho tsy hanisy vinaingitra ary tsy dia mivoaka matevina loatra izy, andramako, jereo ...
Salama, mbola tsy nanao an'io lactonese io aho ary ny marina dia manintona ny saiko izany fa ny olako dia misakafo aho, azo atao amin'ny ronono vita amin'ny scimmed ve? hikorotana ve? Matahotra aho ny manandrana azy raha sanatria ka manapaka ary tsy mendrika izany. Raha nisy nanao an'io dia valio aho azafady, misaotra.
Maria, mbola tsy nanandrana aho fa angamba hanandrana. Raha sahy ianao dia lazao anay.
Salama! Efa nanao laktone nandritra ny taona maro aho fa niaraka tamin'ny mixer satria tsy mahazaka atody ny reniko. Omentsika antsy ho an'ny zokiolona ny antsy voantsinapy. Miaraka amin'ny mixer dia tsy ilaina ny manafana azy, natao toy ny mayonnaise izy io, fa manova atody ho an'ny ronono, tsy misy mihoatra azy. Hiezaka ny hanao izany amin'ny thermo aho. Etsy andaniny, María Teresa, ataoko amin'ny skimmed na semi-skim foana io ary mbola tsy nokapaina mihitsy aho
Misaotra betsaka anao Patricia tamin'ny nanazavanao ny fisalasalako, te hanandrana aho indray andro any mba hahitako ny fomba fiasany. Hotantaraiko anao ny vokany.
Salama ... androany aho nanao lactonesa ary nivoaka matsiro, satria nasiako kennuts dia nivoaka izy tena tsara. Fiarahabana sy fisaorana noho ny fomba fahandro atolotray anay rehetra.
Mandra-pahoviana no hitazomana azy ao anaty vata fampangatsiahana?
Satria tsy manana atody izy io, dia mety haharitra anao ao anaty siny tsy misy rivotra ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 5 andro. Misaotra nanoratra taminay !!
Takolaka misy cava